WARBIXIN: SHAN Arrimood Oo Real Madrid Ay Ku Garaaci Karto Liverpool Kulankooda Caawa | Laacibnet.net
HomeWararka Champions LeagueWARBIXIN: SHAN Arrimood Oo Real Madrid Ay Ku Garaaci Karto Liverpool Kulankooda Caawa
WARBIXIN: SHAN Arrimood Oo Real Madrid Ay Ku Garaaci Karto Liverpool Kulankooda Caawa
Real Madrid ayaa garoonkeeda Estadio Alfredo Di Stefano ku qaabilaysa Liverpool lugta hore ee wareegga 16ka Champions League.
Markii iskugu dambaysay ee ay albaabada isku xidheen Real Madrid iyo Liverpool waxay ahayd finalkii Champions League ee sannadkii 2018. Real Madrid ayaa ciyaartaas ku badisay 3-1, waxaana Reds iskugu darsamay koobka oo laga qaaday, dhaawacii Mohamed Salah iyo Loris Karius oo hadiyado bixiyey, kaddib markii uu Sergio Ramos jug ka gaadhsiiyey madaxa ee uu dhiishku dhaqaaqay.
Wax badan ayaa iska beddelay Real Madrid sidii ay waqtigaas ahayd, sidaas oo kalena waxa ah Liverpool oo iyaduba aan sidii waqtigaas u fiicnayn, laakiin markii ay usoo gudbayeen marxaladdan wareegga siddeedda ee ay ku jireen 16kii, waxay ahaayeen kuwo xaalado sidan ka beddelan ku jiray, gaar ahaan Real Madrid oo xilligaas xaaladdeedu xumayd. Liverpool ayaa iyaduna xilli ciyaareedku ku xun yahay.
Laakiin labada kooxoodba waxay aad ugu baahan yihiin in ay guul ka keenaan wareeggan siddeedda oo ay semi-finalka tagaan, taasina suurtogal ma aha oo waa in midkood saaxadda ka baxo.
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shan arrimood oo Real Madrid ay kulanka caawa ku garaaci karayso Liverpool:
5. Qaababka kala duwan ee ay Real Madrid ku ciyaarto
Kooxda Liverpool waxa xilli ciyaareedkan kala daadiyey dhaawacyo tiro badan, waxaana waqtigan la joogo dhaawac ku maqan saddex laacib oo ay hubaal tahay in ay u dhibaatoonayaan, waana saddexda difaac dhexe ee Van Dijk, Gomes iyo Matip, kuwaas oo lagu sii darayo Jordan Henderson iyo Divock Origi.
Real Madrid ayaa sidoo kale qabta dhaawacyo, waxaana ka maqan Sergio Ramos. Sidaas oo ay tahay, Zinedine Zidane ayaa tijaabiyey in saddex difaac ay kooxdiisu ku ciyaarto, waana Rapahel Varane, Nacho iyo Ferland Mendy oo uu ku ladhayo Lucas Vazquez oo garabka illaa difaaca midig ah.
Zinedine Zidane inta badan waxa uu doorbidaa in aanu ku khamaarin afarta difaac dambe, balse haddii ay daruuri noqoto, waxa uu ku ciyaari karaa 3-4-3, 3-5-2 ama 4-4-2.
4. Real Madrid oo ku jirta qaab ciyaareed wanaagsan
Real Madrid waxay toddobaadyadii ugu dambeeyey u ahaayeen kuwo wanaagsan oo aan dhinacooda dhulka la dhigin, waxaanay fadhiyaan kaalinta saddexaad iyagoo saddex dhibcood iyo laba dhibcood ka kala dambeeya Atletico Madrid iyo Barcelona oo ka horreeya.
11kii ciyaarood ee ugu dambeeyey dhamaan tartamada, wax guul-darro ah may soo arag, waxaanay badiyeen sagaal halka labada kalena ay barbarro galeen. Muddadaas, lagama dhalinin wax ka badan hal gool, waxaana ugu dambaysay laba gool oo laga dhaliyo dhamaadka bishii Janaury oo Levante ay kaga badisay 2-1, taasina waxay muujinaysaa in difaacoodu fiican yahay.
3. Karim Benzema oo gool-dhalintu u furantay
Weeraryahanka Real Madrid ayaa bilihii ugu dambeeyey ay saaxiib ahaayeen shabaqa. Toddobadii ciyaarood ee ugu dambeeyey dhamaan tartamada, Benzema waxa uu saxeexay sagaal gool iyo hal caawin uu ku daray.
Laacibkan ayay si fiican isku fahmeen Marco Asensio oo isaguna saddexdii ciyaarood ee ugu dambeeyey goolal dhaliyey.
Afka hore oo ay labadan ciyaartoy kusoo wada bilowdaan, waxay Los Blancos ka caawin kartaa in ay shabaqa Liverpool gaadhaan, isla markaana goolal dhaliyaan, taas oo ka caawin karta in kooxdoodu guuleysato.
2. Difaaca Liverpool oo liita
Waa sabab kale oo Real Madrid ay ku garaaci karayso Liverpool, sababtoo ah, difaaca ayay ugu soo bilaaban doonaan Ozan Kabak iyo Nat Phillips oo ay adag tahay in ay u babbac-dhigi karaan weerarka Real Madrid, sida Benzema, Asensio Rodrygo iyo Vinicius Junior.
Laacibka reer Brazil ee Vnicinius ayaa orodkiisa ku khalkhalin kara difaaca, halka Benzema iyo Asensio ay gool-dhalintooda iyaguna ku dili karaan.
1. Real Madrid waxay ku fiican tahay khadka dhexe
Liverpool khadkeeda dhexe ayaa xilli ciyaareedkan aan si fiican iskula haysanin kaddib markii uu dhaawaca kaga baxay Jordan Henderson.
Wijnaldum, Fabinho iyo Thiago Alcantara ayaa la filayaa in ay kusoo wada bilowdaan ciyaartan, waxay se ka hor tegayaan Casemiro, Toni Kroos iyo Luka Modric oo sannado badan iska soo garab ciyaaray, kuna soo wada guuleystay afar Champions League.
Halka uu Thiago ka yahay kubbad-abuuraha Liverpool, waxa xaqiiqo ah in tayadiisu aanay xaddidnayn laakiin uu xilli ciyaareedkan ku cusub yahay Liverpool oo aanu weli helin qaab ciyaareedkiisii fiicnaa. Real Madrid waxa iyadana kubbad-sameeyeyaal u ah Luka Modric iyo Toni Kroos oo abuuri karaya khatar ka badan midda ay samayn karayaan Thiago iyo Wijnaldum.
Labada reer Brazil ee Fabinho iyo Casemiro oo shaki la’aan ka mid ah kubbad-burburiyeyaasha ugu wanaagsan waqtigan ayaa iyaguna halgan u geli doona sidii ay kubadda uga joojin lahaayeen goolka, laakiin waxa ugu dambaynta shaqadiisu farxad ku dhamaan doontaa midka ay sida fiican ula shaqeeyaan ciyaartoyda kale ee kooxdiisu.
Ahmed moha says:
Liverpool waxeey haayso malaha chanpionkii hore ayeey ka fiicneed caawa waxeey qaabileeysaa guul daro
Mxaad real madrid oo kaliya uga hadlaysaa, sidoo kale soo bandhig meelaha lagu garaaci karo iyaga, waa hadii ay jirto dhexdhexaadnimo.
Liima Adde says:
Ilaa hada kaama haayo dhax.dhaxaad nimo waxaad ka hadleeysna malaha aqoonba umalihid ee stop